14 astaamood oo cusub oo aan ka heli doonno Xubuntu 14.04 | Laga soo bilaabo Linux
14 astaamo cusub oo aan ka heli doono Xubuntu 14.04
On blog ah Sean Davis Waxaan ka helay maqaal xiiso leh halkaas oo ay ku tusayso 14 riwaayad oo soo geli doonta Xubuntu 14.04 waana inaan idhaahdaa noocaani cusub wuxuu u ekaan doonaa qurux. Aan aragno waxa ay yihiin:
1. Raadin cusub LightDM, labada galitaanka iyo shaashadaha qufulka:
2. New wallpaper cusub:
3. Lix sawir oo ay soo dirtay Beesha:
4. Naqshad cusub oo guddi ah. Sida soo socota: [Liiska Whisker] [badhamada daaqada] [Aaga wargelinta] [Tusiyaha tusiyaha ah] [Saacadda]
5. Makhaayadda Maqaarka ugu talagal
6. Shabakadda, Awood-bixinta, iyo Tusaha Codka waa la cusbooneysiiyey oo si buuxda ayey u shaqeeyaan.
7. Mawduucyada cusub ee lagu soo daray waxay ka yimaadeen mashaariicdii caanka ahayd Mashruuca Shimmer y Mashruuca Numix.
8. Xscreensaver waa laga saaray iyada oo laga door bidaayo Nalalka Iftiinka. Locker Locker ayaa adeegsada LightDM si aad u xirto shaashadda, iskuna darsato shaqeynta shaashadda soo galitaanka iyo shaashadda qufulka. Dejiyeyaasha Qufulka Iftiinka waxaa ka mid ah qaabeynta fudud
9. Mugsho, koronto fudud oo lagu kiciyo isticmaaleyaasheenna hadda waa lagu soo daray.
10. Alacarte waxaa bedelay MenuLibre.
11. Furayaasha Siidayn iyo tilmaameha aagga ogeysiinta ayaa mar kale shaqeynaya.
12. Dejinta Muujinta Xfce (Monitor Preferences) waxay hadda taageertaa fiilooyinka kulul ee kormeerayaasha.
13. Curiyaha Qoraalka XFCE hadda waxay taageertaa Zoom. Kaliya waa inaad riixdo Alt iyo jiirka jiirka kor ama hoos.
14. Xubuntu 14.04 waxaa ku jira toobiyeyaal badan oo kumbuyuutar ah iyo iswaafajin fiican oo leh teebabka multimedia.
Nawaafiyaha webka: www or Homepage or weyn+W
Akhristaha Fariinta: Mail or weyn+M
Tunar: Kombiyuutarkayga or weyn+F
Terminal: weyn+T or Ctrl+Alt+T
Ikhtiyaarrada kormeerka: Display or weyn+P
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » 14 astaamo cusub oo aan ka heli doono Xubuntu 14.04
Ma rumaysan karo! Boostadaada ku saabsan Xfce. Aad baad u mahadsantahay Elav! Waxaan rajeynayaa sii deynta Xubuntu 14.04 si aan u beddelo midka aan hadda haysto: 13.04. Waxay umuuqataa mid xiiso leh. Waxaan rajeynayaa in tani aysan aheyn boostadaadii ugu dambeysay ee ku saabsan Xfce. Salaan.
¬_¬ Waxaad u leedahay sidaan u necbahay Xfce .. Weli waan jeclahay isaga .. 😛
Maya maya maya! Marnaba kuma dhihin ujeedkaas! Waxyaabaha ayaa ah, tan iyo markii aad noqotay isticmaale KDE, waxaad iska dhigtay Xfce. Weli waan xasuustaa maqaalladaadii 3 sano kahor Xfce! Ah, sabab macquul ah: maxaa yeelay "wali jacayl baad u haysaa isaga" markaa waa inaad wax ka qortaa Xfce marar badan. 😉
Heer sare Wixii lubuntu, ma jiri doonaan wax halkaas jooga? Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa distoorku markale keeno.
Ku jawaab kalevito
Waxa aan rumeysan karin ayaa ah inuu isagu iskiis ula saxeexday xitaa xbuntu iyo maalinta uu baxayo uun.
Shaqada Sean Davis, ugu yaraan waad xusi kartaa haddii aad dhibic dhibic ku soo guurtay oo aad goor dambe turjumtay.
Maqaal aad u fiican, Elav. Miyaad u samayn doontaa mid la mid ah Lubuntu?
Hagaag, haddii Lubuntu ay lahayd isbeddelo badan oo la xuso, laga yaabee inaan wax qaban karno.
Lubuntu wax cusub oo cusub ma leh, sii deyntani waxay ahayd inuu hagaajiyo cilladaha, helitaanka xasilooni u qalanta LTS iyo u diyaar garowga guuritaanka LXDE ilaa Qt ee 14.10.
Goorma ayaa la soo saarayaa nooca 14.04? Waxaan maqlay in Ubuntu soo baxdo berri 17 laakiin waxba kamaan helin distoorkan miyaad i hanuunin kartaa?
Badanaa dhammaantood waxay soo wada baxaan waqti isku mid ah .. 😉
Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada degdega ah, berri waan arki doonaa haddii aan cusbooneysiin karo, waxaan la jiraa Xubuntu, Ubuntu, Lubuntu haddana waxaan u socdaa inaan soo dejiyo Kubuntu, waqti dheer ayaan heli doonaa illaa aan ka cusbooneysiiyo, mar kale mahadsanid.
xiiso leh, maan jeclayn nashqadda cusub ee meenku waxay u muuqataa cinamon .. Waan ka sii jeclahay maadaama ay tahay nooca lts 12.04
kan ugu fiicani wuxuu ahaa jiirka qaababka joomatari ee shaashadda xagga hoose
wax ku biirinta wanaagsan ee kuweenna adeegsada jawigan iftiinka iyo waxqabadka leh
Waad ii beddeli kartaa aniga, ma jecli oo waxaan uga tagaa sida ay la socoto menu-dhaqameedka. Nasashada Xubuntu 14.04 LTS si aad u wanaagsan ayey u shaqeysaa waxaan ku rakibay tan iyo beta 1 waana la cusbooneysiiyey maalinba maalinta ka dambeysa dhibaato la'aan. 🙂
Waxay umuuqataa in noocani uu shaqeynayo waxbadan sidaa darteed waxaan fiirin doonaa mashiin farshaxan ah.
Waraaqda cusub ee 'ubuntu' waxay iila muuqataa mid ka mid ah kuwii ugu fiicnaa ee ay sameeyeen kanna waa inuu 10 jeer ka fiican yahay, waxay umuuqataa inay noqon doonto mid ka mid ah xubinta ugu wanaagsan ee la sii daayo, waan ku faraxsanahay inaan isku dayo.
Waxay umuuqataa mid aad ufiican, hada waxay ubaahantahay oo kaliya inay u haajirto GTK3 🙂
(╯ ° □ °） ╯︵ ┻━┻ Waxaan rabaa
Wanaagsan, runtu waxay tahay in markaan arko qoraallada XFCE ay iga dhigeyso inaan doonayo inaan mar kale u noqdo desktop. In kasta oo aan ku jiro Linux Mint oo leh Cinnamon, imtixaan wanaagsan oo Debian ah oo leh XFCE waa la seegay!
Hagaag, waxaan u maleynayaa inaan dib ugu laaban doono Xubuntu, ugu yaraan waxaan isku dayi doonaa isla marka uu webka Xubuntu shaqeeyo maxaa yeelay ugu yaraan aniga ima shaqeynayo. Waxay ahayd inaan u wareego Linux MInt xfce tan iyo nuqulkii ugu dambeeyay ee Xubuntu maxaa yeelay astaamaha codka ma shaqeyn mana dareemin inaan xallinayo, marka lagu daro waxaan isku dayay Linux Mint dhowr bilood laakiin runtu waxay tahay inaan doorto Xubuntu, LM aad ayey iigu raran tahay barnaamijyo dhadhan.
Boostada aad ufiican Elav, waxaan ahay isticmaale Mint XFCE 16, waan jeclahay XFCE, waxaan sugayaa sii deynta Mint 17 dhamaadka bisha Meey waxaanan rajaynayaa inay sidoo kale kudarsatay wararkan nooca XFCE.
Ilaahoow waan jeclaaday *. *
Ku jawaab DaCooks
maalin kasta xubuntu ka sii qurux badan!
Wax wanaagsan oo ku jira Xubuntu iyo Lubuntu labadaba, waxay tirtireen sheygii foosha xumaa ee ku dhuftay hooyadaa maalinta Hooyada ee loo yaqaan Xscreensaver. Nidaam xiraha ugu xun abid. Iyo ñapa, haddii aad dooneysid inaad bedesho llama aan waxbo ranjiyeynin, waa inaad dib u aruurisaa. Hadaad fiiriso ilaha waxaad arkeysaa in abuuraha (ama abuurayaashu) uusan rabin CIDNA inuu qaado ololkaas foosha xun. Rag aad u Furan Source! HAHAHA. Waa hagaag mahadsanid in hadda ay jirto mid kale.
By habka, Lubuntu waxay timaadaa QT! 😀
Qayb ahaan hadda, laakiin dhammaystir tan xigta.
maalinta uu dhammaystirmay lxde-qt ay soo dhowdahay: oops
Muddo ayaan tijaabiyey waana jeclahay, sidee bay ku noqon kartaa inay aad uga fududdahay Linux Mint xfce? Waxay ila tahay inaan waqti badan ku qaadan doono qaybintaan, shaqo fiican ayay qabteen, ugu dambeyntiina heesaha oo dhami waxay u muuqdaan kuwo wanaagsan.
Xaq, way dhakhso badan tahay maxaa yeelay waxay isticmaashaa Lightdm, ma ahan sida Mint 16 XFCE oo adeegsata Mdm. Waxaan ku jiray Mint 16 XFCE, waxaan isku dayay Xubuntu 14.04 halkaana waa joogayaa, in kastoo ay iga maqnaan doonaan waxyaabo yar yar oo ku saabsan reexaanta 🙂
Waxaan u maleynayaa in dadka jecel XFCE oo dhan inay ogaadaan Voyager, oo ah jahwareer Faransiis ah oo fiiro gaar ah u leh muuqaalka iyo muuqaalka muuqaalka badan. Dhanka kale, waxay leedahay laba nooc, mid ku saleysan Ubuntu (midka ugu weyn) iyo mid kale oo ku saabsan Debian, sidaa darteed qof walba wuu ku faraxsan yahay.
Tilmaamkiisu waa: http://voyagerlive.org/
Haye, waxaan rabaa inaan sii wado isticmaalka Xubuntu, waan joojiyay sameynta tan iyo markii aan iibsaday kombuyuutarkeyga cusub, waa nooc isku murgsan maxaa yeelay waxaan ku leeyahay qeeybo badan diskiga adag mana doonayo inaan wax burburiyo, xitaa inbadan maxaa yeelay mid ayaa kujira soo celinta Windows 8, oo aanan awoodin Jooji haysashada, ma ammaan baa in la sameeyo rakibidda beddelka si loogu rakibo W8 ??? taasi ma tirtiri doontaa qayb kasta ???? mahadsanid.
Soo degsashada iyo diyaarinta wax walba si loo cusbooneysiiyo nidaamka xubuntu 12.04. Markii aan bilaabay fikradayda dhiigga ah ee Linux iyo tan 'distro' waxay si fiican ula qabsatay jahwareerkeyga. Hada waxaan rabaa inaan sifiican ugubilaabo. Waxaan jeclaan lahaa in aan kala sooco qaybta / guriga inta kale laakiin ma aqaano sida tan loo sameeyo… qoraal aad iyo aad u xushmad badan oo tilmaamo lagu bilaabayo wax qabadku fiicnaan lahaa. Hadda oo LTS-kan cusub soo baxay.
Salaan kadib aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa shaqadaada!
Markii aan qof u rakibey Xuntoo waxaan la yaabay sida wanaagsan ee loo dhammeeyey in KDE uu ka tago, ka dib cayayaanka ayaa yimid, nasiib darro wax yar ayaa u haray nooca LTS oo macno malahan isticmaalka Pangolino, waxaana helay Debian. Kee baa dadaal badan.
Ku jawaab amulet_linux
Ma rumeysan karo sida xun ee aan u ahay waqtigan, waxaan ula jeeday Xubuntu iyo XFCE, ma jiraan Xuntoo iyo wax ku saabsan KDE
Waa la qabtay !! Waxaan horeyba u rakibay xubuntu 14.04!
Waa wax aad u wanaagsan! La xaqiijiyay: Waxay xoogaa ka dhaqso badan tahay 12.04 waxayna umuuqataa mid xasiloon.
Ma beddeli doono 2 sano oo kale! XD
Aad baad ugu mahadsan tahay wax walba!
Runtii waan jeclahay mawduuca inkasta oo aanan isticmaalin * ubuntu hadana waxay umuuqataa shaqo aad u wanaagsan oo ka socota Canonical:]
aaahh Elav !! Waxaad igu gelisay xaalad cakiran qoraalkan ... Waxaan ahay isticmaale LMint 16, dabcan laga soo qaatay Ubuntu, waxaan doonayay inaan sugo LTS-da LMint (17 waxay ila tahay) laakiin hadda ma garanayo inaan ku laabanayo (X) ubuntu ama aan sugayo 17-ka LM ...
Hagaag, waxba kuma kiciyo inaad isku daydo .. ama haa? 😀
Waxaan durbaba diyaarinayaa wax walba oo aan ku rakibo 😛
… Waana sida xubuntu 14.04 u eg → http://i.imgur.com/FrPk9hl.jpg
Haddii aan dib ugu noqdo Xubuntu waxaan dib ugu laaban lahaa Ubuntu Studio (xusuusnow inay u wareegeen Xfce) laakiin taasi waxay kuxirantahay haddii tilmaame-appmenu lagu dhejin karo Xfce-da cusub maxaa yeelay waxay ila tahay aniga inay dhibaato ka haysato iswaafajinta maktabadda
Waan kala soo bixi doonaa (Ubuntu Studio) oo waxaan ku tijaabin doonaa mashiin dalwad ah si aan u arko sida ay u shaqeyso
Maxay yihiin shuruudaha lagu rakibo xubuntu? Waxaan hayaa Aspire one 725 AMD Dual Core Processor C60 oo leh 1.333 GHZ turbo core. 2 GB xasuusta Ram. Halkaas ayaan ku rakibi karaa.
Waxaan rajeynayaa in tilmaame-appmenu lagu rakibi karo maxaa yeelay tan iyo nooca 12.04 laguma rakibi karo sababo la xiriira maktabadda
Hadday sidaas tahay, ka labalabeyn maayo inaan soo dejiyo Ubuntu Studio maxaa yeelay hadda waxay leedahay Xfce halkii laga heli lahaa Gnome, waxay noqon laheyd Xubuntu laakiin leh codsiyo badan oo kala duwanaansho iyo is-dhexgal wanaagsan oo leh jackd ka badan DreamStudio
Faahfaahinta ayaa aniga ii timid super, gaar ahaan toobiyeyaasha kumbuyuutarrada. Waxaan u maleeyay xkill inuu yahay CTRL + ALT + BACKSPACE.
Waad ku mahadsantahay faalladan, waad ogtahay in noocyadi hore aan ku rakibay Compiz in uu leeyahay Desktop Zoom, laakiin hadda waxay horeyba u leedahay Zoom asal ahaan. Waa hagaag, waan sharxayaa waxaan isticmaalaa UbuntuStudio 14.04 oo sidoo kale Xubuntu lagu sameeyo XFCE sidaas darteedna waxay isugu dhow yihiin.
Jawaab Washington Indacochea Delgado
LightDM waa Desktop ku saleysan HTML ama Soo gal., TIXRAAC http://es.wikipedia.org/wiki/LightDM
Ku jawaab Alvaro Garcia Isordia
Wax badan ayaan ku bixiyaa Ubuntu iyo waxyaabaha ka soo baxa, laakiin runtu waxay tahay in qaabkan Xubuntu u muuqdo mid aan laga adkaan karin.
Sidee cajiib ah, waqti ka dib kumbuyuutarkeygu waxyar buu gaboobay Ubuntu sifiican ugama socon.
Waxaan rakibay xubuntu oo si fiican oo dhakhso leh ayuu u socdaa waana kala fog yahay, wuxuu leeyahay naqshad wanaagsan, ma fiicnaan kartid, Linux weyn
Fiidiyow: Muujinaya horumarka mawduuca cusub ee DesdeLinux
KDE SC 4.13 waa la heli karaa